9x24 Podcast: Maareeyayaasha Furaha VS iCloud Keychain | Wararka IPhone
9 × 24 Podcast: Maareeyayaasha Furaha VS iCloud Keychain
Toddobaadkan waxaan la macaamileynaa wararka ugu habboon, sida suurtagalnimada in Apple ay soo saari doonto qalab cusub oo ka raqiisan ama dhegaha dhegaha ee 'Premium' oo la tartamaya noocyada kale ee caadiga ah ee qaybtaan ka dib guusha HomePod. Laakiin sidoo kale waxaan la macaamilnaa arrin sida maareeyayaasha sirta ah. Iyada oo arrimaha amniga aad iyo aad ugu sii kordhayaan bogga hore, lambarka sirta ah ee koontadayada ayaa marba marka ka sii dambeysa sii kordhaya, iyo maareeyayaasha furaha ayaa aad iyo aad u faa'iido badan. Miyay u qalmaan haysashada iCloud Keychain? Maxay yihiin kuwa aan isticmaalno? Aragtidayada ku saabsan Podcast-ka toddobaadkan.
Sidii aan horeyba u bilawnay xilli ciyaareedkii hore, sanadkaan Podcast-ka 'Actualidad iPhone Podcast' waxaa si toos ah loola socon karaa iyada oo loo marayo kanaalkayaga YouTube-ka oo aan uga qayb qaadan karno wadahadal lala yeelanayo kooxda Podcast iyo daawadayaasha kale. Ku soo biir channelkeena si aad u hesho ogeysiisyo goorta duubista tooska ah ee fiidiyowga la bilaabayo, iyo sidoo kale marka aan ku darno fiidiyowyo kale oo aan ku daabacno. Dabcan sidoo kale waxay ku sii jiri doontaa iTunes si aad u dhagaysan karto markasta oo aad rabto adoo adeegsanaya arjiga aad ugu jeceshahay Podcasts.. Waxaan kugula talineynaa inaad adiga iska qor iTunes si qaybaha si otomaatig ah loogu soo dejiyo isla marka la helo. Ma rabtaa inaad halkan ka maqasho? Hagaag wax yar oo ka hooseeya waxaad haysataa ciyaaryahanka aad sameyso. Waxaan sidoo kale leenahay Liiska Ciyaaraha ee ku saabsan Apple Music oo leh muusikada ka dhex muuqata Podcast (haa, sidoo kale waxaan ku dhex leenahay Spotify...).
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Wararka IPhone » podcast » 9 × 24 Podcast: Maareeyayaasha Furaha VS iCloud Keychain
Android P horeyba wuxuu uga tagay muuqaal ah waxa mustaqbalka ah "notch" ee Android
Sarkaal booliis Mareykan ah ayaa AirPod ka xaday Apple Store waana la ugaarsadaa